တရုတ် 640 × 640-B အလူမီနီယမ်သေတ္တာစက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ | Ruichen
1. အရွယ်အစား： 640*640*74mm
2. အလေးချိန်: 5.5kg
3. မော်ဒယ်: P1.904/P2.5/P5/P10
PCB ဘုတ်အဖွဲ့ P1.904/P2.5/P5/P10mm
လေယာဉ်ကိစ္စ ကိစ္စတစ်ခုတွင် 5pcs ကက်ဘိနက်၊ ကိစ္စတစ်ခုတွင် 8pcs အစိုးရအဖွဲ့
၁။ လျင်မြန်သောအအေးခံခြင်း - modular circuit ကိုကာကွယ်ရန်အကောင်းဆုံးအပူဖြန့်ကျက်ခြင်း
၅။ မြင့်မားသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကိုပြင်ပနှင့်အိမ်ပြင်အတွက်သုံးသော module ပုံဆွဲအတိုင်းလုပ်ဆောင်နိုင်သည်
၆။ လွယ်ကူသောတပ်ဆင်မှု - တပ်ဆင်မှုသည်စက္ကန့် ၂၀ သာကြာသည်
မျက်နှာပြင်၏ ၇။ ကော်အင်အားသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စံနှုန်းသို့ရောက်ရှိသည်
၈။ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီးအကြီးစားထုတ်လုပ်မှု၊ ပြီးပြည့်စုံသောထုတ်လုပ်မှုနှင့်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်
ယခင်: 640 × 640-A လူမီနီယမ်သေတ္တာ
နောက်တစ်ခု: ၅၇၆ × ၅၇၆-အလူမီနီယံသေတ္တာတစ်လုံး
၁၂၈၀ × ၉၆၀ မဂ္ဂနီစီယမ်သေဆုံးမှုကိစ္စအားကစားရုံအစိုးရအဖွဲ့